PRO RAVALOMANANA : MIPASOKA NY EFA MALAMA – MyDago.com aime Madagascar
PRO RAVALOMANANA : MIPASOKA NY EFA MALAMA
Nihaona tamin’ny mpanao gazety indray androany maraina ny Pro Ravalomanana tetsy amin’ny foiben’ny Tim Bel’air. Fanamafisina ny voalazan’izy ireo tamin’ny mpanao gazety farany teo no nisongadina tamin’izany, ka tafiditra tao ny fampafahantarana ny Pro Ravalomanana. Nilaza ny mpandrindra Hariliva Rajaonah sady tale kabinetran’ny Ct Zafilahy fa feon’ny vahoaka no entin’izy ireo na amin’ny fomba fiteny na amin’ireo taratasy zaraina eny an-dalambe eny. Ity Pro Ravalomanana ity dia anisan’ny mitsikera ireo mpitarika ny tolona amin’izao fotoana izao, kanefa dia azo lazaina fa mipasoka ny efa malama ihany izy ireo hatreto. Ireo zavatra izay notakian’ny Ankolafy Ravalomanana toy ny famerenana ny filoha Ravalomanana Marc, ny fanokafana ny radio nakatona, ny famoahana ny gadra politika any am-ponja ireo no naverimberin’izy ireo nandritra ity tafa ho an’ny mpanao gazety ity kanefa milaza ho manana paikady hamahana izao krizy izao izy ireo. Ny mahamaika ny Pro Ravalomanana dia ny hanangana izany manerana ny Nosy kanefa ireo fikambanana izay voalaza fa 25 ao anatin’izy ireo aza dia tsy mahazaka olona akory. Mijanona amin’ny fanambarana sy adihevitra anaty efitrano ihany aloha ny hetsika. Ny zavatra fantatry ny vahoaka ary izay no nitolomana teto nandritra izay efataona izay dia ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana Marc eto an-tanindrazany amin’ny fomba haingana.
Photos – Ravalomanana à l’embarquement en Afrique du Sud
Ho avy amim-pahatokisan-tena ny filoha Ravalomanana!
Auteur Solo Razafy*Publié le 4 février 2013 Catégories Politique
19 pensées sur “PRO RAVALOMANANA : MIPASOKA NY EFA MALAMA”
Matoa tsongoina ny faty, dia mba tsy andevenana olona mbola velona ! Sa tsy izany indray ry ranavalona ?
Matoa anie ry zareo mbola mipasoka dia mba mety hitan-dry zareo fa mbola somary misy « faux-pli » ny lamba ê ! Anisan’ny mba tsy tiako mihintsy ireny « faux-pli » ireny ry zavavy eto !
Ekena fa hoe tsy « santraly vapera » ny fera fipasoany, fa ilay mbola apetraka eo ambony saribao ireny, fa mba miezaka ihany ry zareo manao an’izay kely azony atao ê !
Ireo manana fera tena raitra aza, toa mbola manao somizo sy zipo tsy afa-poritra na afak’oritra ! Asa na mety ny fomba fiteny na tsia, tsy haiko intsony fa vonjeo kely ry ranavalona â !! MDR !!!
Avelao ry zareo hanao ê ! Efa tanjona iray ary tena goavana no hiraisana !
Raha mba nusy zavatra nitsangana ataoko fa tsy adala ny olona,
tsy zaranareo tsy han’inona ao @ Ankolafy Ravalomanana ve mba misy
misalovana ny asanareo, tokony ianareo hisaotra ireo olona ireo fa tsy ianareo indray no sady efa
tsy hita hoe ahoana no mbola mila voatsiary, ireny aza no vavan’ity ilay ambasadaoro mbola tsy hita
izay mba hetsika mba fanoherana koa ny olona manao ny ASANAREO INDRAY NO LAZAINA FA
MIPASOKA NY EFA MALAMA????INONA NO NALAMA TEO hatr@ nahavitan’ity KISONIA?????
fa tsy vao maika FAHAVOAZANA ????i dada aloha dia MIASA IRERY.
MANKAHERY ANAREO TOMPOKO isany ry PRO- dada , aza mihaino izay vavan’ny matian-drano
any fa ny adidinareo vitaina dia vita a!!!MANKASITRAKA TOMPOKO ô!!!mahavità be e!!!MAHEREZA!!
Hita mivaingana eto @ ity lahatsoratra ity fa Tsy manana eritreritra ny hanao hetsika sy hanohihtra ny FAT ny sasany. Lazaina ampahibemaso hoan’izay Tsy mahalala fa sakananan’ny mpitarika Tsy hi hetsika mihitsy ny zanak’i Dada, ary ny kabary sy ny fivavahana no entity hanaovana ny tolona.
Aza adino anefa fa ire to pro-Ra8 ire to anie ka efa Tao foana e. Manjaka izay ny FAT dia tray mba misy mihitsy fanoherena , fa ny Kiady an-trano aza no atao. Te hilatsaka hisolo an-dRavalo daholo ireo mpitarika. Dia Tsy azo tenenina ve Izany.
Izaho hatreto aloha dia mankasitra an’ity pro-Ra8 ity ary fantatro tsara ny faniliana nataon’ireo mpitarika ny GTT, PSD,VAMI,VOT,FRDL ary izay indray dia hanilika ny Pro-Ra8. Ny tolona dia Tsy an’ireo mpitarika fa an’ny vahoaka, koa mansion na no tsy henoina ny vahoaka.
Ireo no nihetsika, tahakan’ny GTT dia ilay COLLABO indray ve no hanakiana. Fa maninona ny olona no nosakan’ny mpitarika Tsy hihetsika ? Mbola tsy hita foana hatr@ izay aloha izay paik’ady. Ary Zara raha misy ireo hetsika fanoherena. Nefa nasty rariny mitombo andro aman-Alina. Zanak’i Dada ny Pro-Ra8 ary aza sakanana. Tokonyampiana izy ireo.
Iza ary taiza ireto mitonona ho
pro-ravalo ,fa ireo manohana ny Filoha atrizay ka atrizao ve tsy pro-RAVALO ,tsy akaiky ve izy ireo..? Sao ianareo no mitady akanjo sy satroka hafa loko mba hanavahana anareo ? Mety izany hevitra izany dia mba ho fantatra sara iza ianareo mamoha varavarana mivoha midananadana..
NISY FOANA IREO MPITADY TOERANA REHEFA AKAIKY HIVAHA NY OLANA !ARY TSY HAMENATRA AZY IREO NY HOHAMBO FA NOHO IZY IREO NO NAMAHA NY OLANA !
5 février 2013 à 1 h 16 min
Ny Pro-Ravamanana dia anarana fikambanana no foto-kevitra hijoroana. Ohatra ny Legaliste dia misy karazany maro: Ravalomananiste,pro-RAVALOMANANA , anti-Rajoelina, 3 mouvances sns… Torak’izany koa ity fikambanana ity, teo aloha, ohatra dia efa nisy ny atao hoe, Sahafa be, zanak’iDada, sns… Anarana fikambanana io fa Tsy hoe Rehefa Tsy ao ianao dia Tsy mpanohana an-dRavalo.
Marina eto fa olona ao @ MAGRO daholo izy ireo ary Mahita fa Tsy Mandroso ny tolona, nefa ny mpitarika Tsy mamaly mihitsy ny heather am-basho aka. Fa nohon’ny fitiavana an’i Dada dia miaritra ny olona.
Ekena LAZALAZAO !
Avelao hipasoka izay rehetra vonona hipasoka !
Hoy ny ntaolo hoe « izay mamerina indroa, manana ny antitra » ! Raha hitan-dry zareo fa mbola matsatsotsatso, ary tsy arak’izay hitiavany azy, na mamerina in-telo na efatra aza tsy maninona !
Izao fotsiny : Aoka mba tsy entina hitadiavan-tseza ny antony hitolomana, fa dia tena hetsika entina hanavotana ny Firenena !
Ny tao-trano tsy vitan’izay irery, koa samia miasa ary manao izay asa tandrifiny ; ary izany dia ao anatin’ny firaisan-kina no tokony atao ! Ho anareo mpitarika, ampisehoy marina amin’ny vahoaka fa tena miasa ianareo ; ireo izay « nahazo toerana », porofoy aminy fa mendrika anareo ny vola azonareo isam-bolana AVY AMIN’NY VAHOAKA !!
Rehefa tsy manao an’izay tokony ho ataonareo ianareo mpitarika, indrindra ireo lazain’ny olona hoe « nihiditra système », dia aza gaga rahatoa ka lasa eritreritra ny vahoaka, na koa tsy mametraka ny fahatokisany any aminareo intsony ry zareo !
Izao dia mody miady an-trano ny mpanongana, foronina daholo izao antsanga tsy aman’orana izao, ary dia hoe hahemotra indray ny datim-pifidianana ! Setrin’izany dia mitohy ny fihinanana, ny fandrobàna,…. ! Maniry toy ny anana eo an-tokotanin’ny mpanongam-panjakàna sy ireo namany mpanohan’azy ny fiara tsara tarehy sy 4×4, kanefa ny vahoaka matin’ny hanoanana sy miha-malemy, rehefa tsy matin’ny dahalo sy ny adin-tsaina ary indrindra ny aretina !!
5 février 2013 à 10 h 20 min
Mahonena itony olon-tsotra angah????hihiiiii
Ary aza manonona akory ny anaran’i dadanay fa MANALABARAKA
azy fotsiny , ity mba fomba fisainana e!!!MAMPĖ be!!!!!!tssssssssss
Aza musy variana fa ny dikan’ilay ady an-trano dia efa TETIKA
HAMADIANA PALITAO INDRAY IRENY, ny omby mahia hono tsy lelafin’ny
namany ka efa hitany fa efa hilentika ny sambo dia mitady lalana hafa indray hiantsapazana sitrany
MITOHY IHANY ILAY FIHINANANA.Aza asiana sira akory fa avelao SAMY HISY HO FATY AO FA
IZY MIANAKAVY SAMY FOZA IHANY IREO e!!samy tompon’andraikitra @ izao FAHAVOAZANA
MIANJADY @ TANINDRAZANA IZAO IREO ARY TSY HO AFA-BELA @’IZANY.
TOMPON’ANDRAIKITRA IREO TSIRAIRAY AVY NA HIADY HIFAMAKY LOHA AO AZA SAMY ALIKA.
Miala tsiny aminao ranavalona fa toa misy fahamarinany ihany, io volazan’i olon-tsotra farany io, MBA TSY HILAZANA HOE MARINA MIHINTSY ( présomption d’innocence oblige, mdr )!
Nahoana ? Misy fifandraisana amin’ilay fanaovan-tsonia ihany io ! Natao ny sonia tamin’ny volana septambra 2011, ary efa febroary 2013 isika izao : Nisy fandrosoana ve ny fanatanterahana an’ilay tondrozotra ? Tsia tompoko no valiny, ary tsy nandroso na dia iray metatra aza !
Ireny fanankànana ny Filoha Ravalomanana ireny, ireny famingavingaina ny vadiny ary fikasihan-tànana ny vinantony teny Ivato ireny, izany rehetra izany ve dia ao anatin’ilay hoe FITADIAVANA FITONIANA ?
Ny zavatra mampalahelo dia NITAZAM-POTSINY RY ZAREO MODY NITSENA, ARY TSY NIARO, ARY TSY NISY FITORIANA AKORY NATAO NA KOA HETSIKA TSY FANKASITRAHANA !!
Rahoviana ireo « mpitarika » ireo vao mba hanao toa an’i Gandhi, na koa ireo mpitolona malaza NANAO GREVE DE LA FAIM ?
Raha milaza fa tsy afa-manaotra ireo mpitarika ireo ao anatin’io rafitra tsy mamokatra io, dia tokony mihiditra ao amin’ny Fiangonana Tranovato Faravohitra IZY REHETRA, DIA MANAO GREVE DE LA FAIM AO !
Fa raha ny bikabikan-dry zareo no jerena, toa tsy ho tantiny izany, fa mamy loatra ny kafe sy dite, ary milay ny saosi..sy !!!!
Tsy hitako io soratra etsy ambony io ! Ary toa tezitra be izany havako izany ? Eny ê, izaho koa aza indraindray mba… kanefa tsara ny mananatra mora ! Ataovy toy ny manana-janaka na mampiditra zavatra ao anaty lavaka re ê !
Mihiditra kokoa rehefa atao moramora, ary tiliana tsara aloha ny lasibatra ! Izany akory tsy midika fa tsy marina ny voalazanao, na koa hoe tsy mety ny ataonao !
Mba jereo anie ny an’olona ê, ny ankizy dieny tanora dia efa ampianarina manindry ny sasany sahady !
Androany amin’ny 16h45 ka atramin’ny 18h15 i Fabius dia hanao kaonferansy ao amin’ny rue d’Ulm (Normale Sup Filière Diplomatie ), ary « Diplomatie d’influence – La France, puissance d’influence » no thème !
Mandeha daholo na Diplomatie économique, d’influence, ary farany reko des Territoires !
Ny an-dRamalagasy, tsy mianatra manohitra amin’ny rariny, fa toa ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny indray aza no manomehy ohatra ratsy ! Any ka zatra mangataka lava, ary tena mahavita manao ny tsy mety rehetra rehefa tsy azo ny zavatra niriana na notsiriritina !
Ka ialahy anie zatra mijery ambany foana e!!!
MARINA IZANY! ILAY FARANY HEKEKO 100% azafady tompoko Olon-tsotra,
misaotra KINTANA a! fa ilay ery ambony anie no hitako koa e!!!matoa ireo PRO- nijoro dia io voalazan’
i Olontsotra io ambany io ny ANTONY, izy ihany anie no namaly azy e!!dia mbola miala tsiny.
Efa tsy takona hafenina intsony ny FIHISATR’ireto mpitarika ao @ Magro ka mahatonga ny olona manjary
mitady hevitra fa izay zavatra any ambadika SANATRIA raha msy dia azy ny azy fa ny hita aloha dia TSY
MISY AZO HANTENAINA NA ANDRASANA @’IREO MPITARIKA EO @ MAGRO hatr@’izao aloha.
5 février 2013 à 12 h 27 min
Izay no nahatonga ahy hiteny hoe, tokony manao fitokonana tsy mihinan-tsakafo ry zareo ! Tsy i risara baomba mihintsy no HANDEHA HANAKANA AN’IZANY !!!
Ho hitan’ny vahoaka ny tena fitiavan-tanindrazana !! Adidy vita, ary rezima koa vita !!!
5 février 2013 à 12 h 35 min
Ho sahy iana…reo ve ? Tsy hiran’ny Ny voanio an ! Ny an’ny olona aza, fangatahana bidize fotsiny !!!!
5 février 2013 à 13 h 14 min
Misaotra betsaka an’i « olon-tsotra » nampatsiaro fa « izany fikambanana MATITA sy MAMIFI fa izany no tena pro dada »
Marihiko eto fotsiny fa ny Pro-Ravalomanana dia ireo olona ao @ MAGRO ihany, fa tsy olona hafa akory, .mety mamalay angamba izany hoe « olona tsy fantan’endrika ».
Manarak’izany dia tsy mampiady mihitsy ny samy Zanak’i Dada,sanatria, fa mampatsiro ny mpitarika mba hanao zavatra, mba hanao hetsika fa mihen-danja foana isika.
5 février 2013 à 18 h 57 min
Ary tsy manan-katao koa ilay maire-n’i Saint Denis a!
mba omeo kely 5 millions FMG any izy izay manana fa
fa izay hono no tsy ampy aminy e!!!efa lalimaso ely ery ranamana, sady ny andro mangatsiaka
ao anatin’io tente io, sao dia mba hidiran’ny rivotra eo Mr Maire a!!sady tsy msakafo no mbola manintsy.
Ny hitako aminareo KintanaMananDrambo,ranavalona, LAZALAZAO,sns itony fa tena ny fampisarahana ny zanak’i dada no hankasitrahanareo sy voizinareo hatramin’ny ela ka tena nanahirana ny mpitarika tao amin’ny Magro izay hialonanareo mafy; satria ve tsy ianareo no nametrahan’i dada fitokisana dia haratsiana foana ireo? Ireo fikambanana PSD,VAMI,VOT,FRDL, sns tononinareo ireo zao miampy ity Pro Ravalomanana ity indray, samy tao sy niaraka ta amin’ny Magro tao daholo fa rehefa nahasarika namana vitsivitsy tao dia misintaka, fa izaho milaza aminareo fa tsy mbola nahita an’ireo aho hatramin’izao hoe mba niray hina niara-nanao zavatra, FA SAMY TE HISONGADINA HO AN’NY TENANY IRERY DAHOLO HOE « IZAHAY MAHAVITA ZAVATRA » nefa mba olona firy tsirairay moa no ao anatin’ireo? TSY ALEO VE TSY TSIPAHAN-DOHA NY LAKA-NITANA; dia io fisaratsarahana io no ankasitrahanareo, de faly be nareo fa miha-vitsy ny ao amin’ny Magro? MAMPANONTANY TENA NY FARANY HOE TSY EFA TETIKY NY FOZAORANA VE IZANY? KA MBA METY HO IZA IANAREO RAHA IZANY?
He izany izy hoe « Ny mahamaika ny Pro Ravalomanana dia ny hanangana izany manerana ny Nosy » NY HANITATRA NY SY HANABE NY LAZANY NO MAHAMAIKA AZY fa tsy ilay hoe « FAMPODIANA NY FILOHA RAVALOMANANA Marc » nefa izany no ankasitrahanareo maromaro eo ambony eo ireo. Fa mody tononina ihany ny fitakiana efa natao hatramin’izay nefa ny tanjona kay hafa, dia mahazo tehaka avy aminareo; TSY TE HITENY AHO HOE FOZAORANA IANAREO raha miray hevitra amin’ny fozaorana toa izany FA ALEO ATAOKO FOTSINY HOE MAMPIAHIAHY( mba tsy dia mahery loatra angamba izay)
Mamorona izay te hamorona fikambanana fa ny anay dia izay tenen’ny Filoha RAVALOMANANA ihany no arahanay. OLONA manana ny tena maha iza azy IZY, mino tanteraka izahay fa fantany tsara ny amboadia mitafy hodi-janak’ondry sy ny tena ondry.
Ny Tena Andry tsy Domelina,
» Ny hitako aminareo KintanaMananDrambo,ranavalona, LAZALAZAO,sns itony fa tena ny fampisarahana ny zanak’i dada no hankasitrahanareo sy voizinareo hatramin’ny ela »
Asa raha mba fantatrao ireo anaranam-bositra ireo. Ary mba ahitra ny masona dia lazaiko fa misy tompon’Andraikitra ny fikambanana ao @ MAGRO izy ireo. ary nahavita be lavitra tsy araky ny eritreretinao. Manotany anao aho hoe inona ilay fisaraha lazainao eto, ilay hoe tokony hanao hetsika ve ? Sao dia ianao bno tsy mahita ny zava-misy ? Sa kosa angamba izahay no tsy naharaka ny tolona. Jereo tsara ilay diabe noeraav’i Zafilahy teny Ambohojatovo sy ny korotana nanarak’izany. Ka iza ilay te-hampisaraka ? Olona efa ao @ fitondrana daholo anie ny mpitarika eEfa hatr@ voalahany no efa natao hoe aza miditra. Fa rehefa tafiditra kosa dia tokony mba hanao zavatra. inona anefa no vita,Lazao eto fa tonga dia ekeko raha ireo fangatahana hatr@ voalohany raha nisy iray tanteraka.
Dia mbola hoy ihany koa ianao hoe :
« Ireo fikambanana PSD,VAMI,VOT,FRDL, sns tononinareo ireo zao miampy ity Pro Ravalomanana ity ….. dia misintaka »
Porofo mivaigana io fa tsy ao @ MAGRO ianao sady tsy manaraka ny tolona. Tsy nisitaka velively ireo fa VOADAKA satria nahita ny lesoka ka nihezaka ny hanao hetsika mivaigana.
Dia mbola hoy ihany koa hoy ianao :
« fa izaho milaza aminareo fa tsy mbola nahita an’ireo aho hatramin’izao hoe mba niray hina niara-nanao zavatra, FA SAMY TE HISONGADINA HO AN’NY TENANY IRERY DAHOLO ».
Mihaonao ireo fikambanana ireo, ary efa nanao hetsika niarakana t@ FOLM sy ny Radio Fre FM t@ voalohany, satria nilaza ry zareo fa tsy hanakiana an’i Dada. Vahoaka be no tonga teny Ambohijatovo t@ io fotoana io, nefa tsy zava-dehibe izany lazaina hoe: FA SAMY TE HISONGADINA HO AN’NY TENANY IRERY.
Ary ankoatry ny PSD sy ny FRDL izay antoko politika dia ho hitanao fa tsy misy hilatsaka ho fidiana izany na handray seza izany ireo fikambanana ireo fa ianao no tsy mahalala satria efa vonona ny hanohana ireo mpitarika an-jamabany.
Marihiko eto fa @ antso an-taribihy ataon’ny Filoha Ravalomanana, dia indraindra avy @ alalan’ny V.O.T no hanaovany izany, ka diniho tsara . Raha lazaiko ianaoi eto hoe misy olona manao barrage eo anelanelan’i Dada sy ny vahoaka ao @ ireo mpitarika ireo.. lava be izany raha resahina fa dia mikipy aloha izahay, satria tolona iray no atao. Fa izahay kosa tsy maintsy hampahafantra an’i Dada ny zava-misy. Dia izany no antony iray haniliana ireo fikambanana ireo mba hilazano hoe « mpamadika na mpanakorotana tahakan’ny voalazanao. Raha ho avy anefa i Dada, ny mahasamy hafa antsika sy ianao dia ianao aorian’ny ordinateur hanara-baovao, izaho kosa ho eny an-toerana hiatrika ny mety ho herim-pamoretana.
Ny fijerinao eto no mamboly ny hakanosana hitondrana ity tolona ity. Mba diniho fa efa 4 taona isika izao.. ka sarotra ny tsy hanao zavatra.
Raha milaza ianao fa mirehareha ireo fikambanana ireo dia mba lazao ahy raha misy olona fantatrao @ izy ireo. Mino aho fa tsy misy satria tsy ny anarany tahakan’ny filazanao no tanjona. Fa ny tolona hamerenana ny filoha Ravalomanana.
NB: Hisaorana be dia be ny GTT
Précédent Article précédent : TIM ANTSIRABE : Nanatanteraka fambolenkazo
Suivant Article suivant : TSY HISY FITONIANA ETO RAHA MBOLA AILIKA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC